Igumbi lokulala eli-2 langoku eline-AC, iPlayas de Tijuana, MX
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRicardo
Yonwabele eli gumbi lokulala li-2 lipholileyo elinochuku lwangoku. Ifumaneka ePlayas de Tijuana (eMexico), nje iibhloko ezimbalwa ukusuka elunxwemeni. 20min ukusuka kumda US. Indawo ekhuseleke kakhulu, indawo yokupaka igcinelwe wena ngaphakathi kwipropathi. Zive usekhaya kude nekhaya.
Amagumbi okulala amabini, ibhedi enkulu eyi-1 kunye neyunithi ye-AC, ibhedi eyi-queen eyi-1, omabini amagumbi ane-flat tv ene-Netflix (akukho ntambo), i-WiFi ekhoyo. Igumbi lokuhlala elinesofa epholileyo, lilungele ukufunda incwadi okanye ukulala. Igumbi lokuhlambela eligcweleyo elineshawa eshushu, iitawuli, iphepha langasese, ishampo kunye nesepha.
Ikhitshi elihle, elinefriji, imicrowave, ioveni yetoaster kunye nomanzi wekofu ukuze ukonwabele ikomityi yekofu okanye iti. Izixhobo zokupheka ezisisiseko kunye ne-condiments. Itafile yesidlo sangokuhlwa. Iifeni, iingubo ezicocekileyo, isomisi seenwele kunye newasha / isomisi xa uceliwe.
Indawo enye yokupaka igcinelwe iindwendwe ngaphakathi kwipropathi yegaraji, imoto yakho iya kukhuseleka!
I-Playas de Tijuana yindawo encinci ekhuselekileyo, ukanti ungafumana yonke into oyifunayo apha, njengeendawo zokutyela, iivenkile zekofu, iivenkile ezithengisa ukutya, i-walmart, ikhemesti, ukutya okukhawulezayo, ii-tacos zokwenyani ezimnandi, iipaki, iindawo zokufikela elunxwemeni, kunye neendawo zayo ezikwiikhilomitha ezisi-7. ukusuka eSan Ysidro US Border.
Umamkeli wethu uya kudibana nawe xa ungena ukuze akunike izitshixo zendlu kunye nolawulo locango lwegaraji ukuze ukwazi ukupaka imoto yakho ngokukhuselekileyo ngaphakathi kwipropathi.
Umamkeli uhlala ngaphantsi kwale ndlu, kwaye uya kufumaneka ukunceda undwendwe ngovuyo, undwendwe luya kuba nemfihlo ngalo lonke ixesha, kodwa lunokuziva lukhululekile ukufikelela kumamkeli ukuba kukho nantoni na efunekayo.
Umamkeli wethu uya kudibana nawe xa ungena ukuze akunike izitshixo zendlu kunye nolawulo locango lwegaraji ukuze ukwazi ukupaka imoto yakho ngokukhuselekileyo ngaphakathi kwipropat…